Otu nwa amadi selitere isi n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC, ma bụrụkwa aka chịrị steeti Abịa n'oge mbụ, bụ maazị Ọjị Ụzọ Kalụ ekwuola na ọchịchị ga-eru ndị Igbo n'ala anyị n'ahọ 2023, ma ọ bụrụ na onyeisi ala bụ Muhammadụ Buharị achịchaa nke ugboro abụọ ya rịtuo.
Nwa amadi a bụ nwaafọ Igbo e ji okwu ya agba izu mere ka a mara nke a n'okwu o kwuru na mmemme ofufe nro owuwe ihe ubi nke e mere n'ụlọ ụka St. Pịta, n'Ụmụahịa bụ isi obodo steeti ya bụ Abịa.
Ọ nọkwazịrị n'oge ahụ dụọ ụmụafọ Igbo ka ha kwado ọchịchị Muhammadụ Buharị na ọchịchị ya nke ugboro abụọ n'ahọ 2019, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka nrọ ahụ ha na-arọ ịchị ala Naịjiria pụta ihè. Ọ sị na ọ ka mma na ndị Igbo siri n'ihe megoro n'oge gara aga wee mụta ihe, maka na otu osisi anaghị aghụ mmadụ n'anya ugboro abụọ, n'ihi na ọ bụkwa agbụsị gbaa otule, ọ mụrụ akọ.
O kwuru na ezi olile anya ndị Igbo pụtara ihè n'otu ndọrọ ndọrọ pati APC ugbu a karịa n'oge mbụ, ma sị na ihe gbasaara ịhụ na onye Igbo chịrị ala Naịjiria bụ ọrụ dịịrị nwaafọ Igbo ọbụla, nọ ọ bụkwa otu ndọrọ ndọrọ APC bụ ụzọ kacha mma a pụrụ si mee nke ahụ, maka na ngwa ngwa onyeisi Buharị chịchara ma chịa nke ugboro abụọ ya, iche ahụ abụrụ nke ndị Igbo.
Kalụ mekwara ka a mara na ọ bụ ya, ma ọ bụ onye Igbo ọzọ nwere ike ịbụ aka na-achị ala Naịjiria ma oge ahụ ruo, ma sịkwa na ihe kacha mma ime ugbu a bụ ijikọ aka ọnụ nke ndị Igbo na isi ọchịchị ala anyị.
Ọ sị na o nweghị ọrụ ọzọ ndị Igbo chọrọ, na-abụghị ịbụ onyeisi ala, ma mekwa ka a mara na ọrụ dị iche iche ọ rụrụ n'ime obodo dị iche iche oge ọ bụ gọvanọ steeti Abịa, ga-eme ka ndị mmadụ mara ihe ọ pụrụ ime, ma ọ bụrụ onyeisi ala, maka na ala Naịjiria niile ga-emepe n'otu ntabi anya.
Na mmechi okwu ya, Kalụ kwuru na ọ ga-amagbu onwe ya ma e nwee onye dịka ya n'Asọ Rọọkụ' dịka onyeisi ala Naịjiria ma ọ bụrụ na ọ dị ndụ ma nọrọkwa n'ezi ọnọdụ ahụike ruo mgbe ahụ, n'ihi na ọ ghọtara ihe niile banyere ọnọdụ akụnụba na mmepe ala Naịjiria nke ọma site n'akụkụ niile ọbụla.